Bhalisa ku-Intanethi - Isikole Sezilimi Eziphakathi, eCambridge
Sicela ugcwalise noma uhlole zonke izinkambu ezidingekayo!
Uma ungathanda ukubhalisa esikoleni sicela:
Gcwalisa ifomu elingezansi bese isicelo sakho sizothunyelwa esikoleni.
Khokha idiphozi (i-1 iveki yeqiniso kanye nemali yokuhlala kanye nemali yokubhuka yokuhlala uma kusebenza) futhi sizobheka inkambo yakho futhi sihlele indawo yokuhlala.
Sizoqinisekisa inkambo yakho nokuhlala lapho sithola idiphozi yakho futhi sikuthumelele incwadi ye-Acceptance. Abafundi abangewona i-EU bayodinga lokhu ukuze bathole i-visa yokungena yase-UK.
Izinsimu ezimakwe nge (*) ziyadingeka.
Sicela usitshele igama lakho!
Sicela usitshele igama lakho lesibongo noma igama lomndeni!
Le nkundla iyadingeka.
Idolobha / Idolobha:*
Le nkundla iyadingeka
Isifundazwe / Isifundazwe / Isifundazwe:
Sicela KhethaAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia, State Plurinational ofBonaire, Sint Eustatius SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoI-Congo, iDemocratic Republic of theCook IslandsCosta Rica-Cote d'IvoireCroatiaCubaCuracaoCyprusI-Czech RepublicDenmarkDjiboutiDominicai-Dominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island ne-McDonald IslandsHoly See (Vatican City State)Hondurasi-Hong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran, Islamic Republic ofIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Democratic Republic of YabantuKorea, Republic ofKuwaitKyrgyzstanLao People Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoEMakedoniya, IYurophu yaseYugoslavia yangaphambiliMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia: isexwayisoMoldova, Republic ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaE-New ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauTerritory yasePalestina, EmatasaPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalE-Puerto RicoQatarReunionRomaniaInhlangano yase RussiaRwandaSaint BarthelemySaint Helena, Ascension futhi Tristan Da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French Ingxenye)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and The GrenadinesSamoaSan MarinoSão Tomé and PríncipeI-Saudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeI-Sint Maarten (i-Dutch Part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaIningizimu AfrikaSouth Georgia and The South Sandwich IslandsSouth SudanSpaini-Sri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyTaiwan, eSifundazweni ChinaTajikistanTanzania, United Republic ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaigalikuniTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineI-United Arab Emiratesi-United KingdomI-united statesUnited States Minor Outlying IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuela, Bolivarian Republic ofViet NamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe Le nkundla iyadingeka.
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili eligcwele, isibonelo, igama@example.com. Inombolo yakho yefoni nekheli le-imeyili ngeke libiwe nanoma yiziphi izinkampani zangaphandle. Imininingwane yakho ivikelwe yiNqubomgomo yethu Yobumfihlo.
Qinisekisa ikheli lakho le-imeyili:*
Le nkundla iyadingeka. Sicela uhlole ukuthi ufana nensimu ngenhla.
Igama lokuxhumana eliphuthumayo:*
Sicela unikeze igama lomuntu esingaxhumana naye esimweni esiphuthumayo. Lokhu kungaba ilungu lomndeni noma umngane.
Ucingo lokuxhumana oluphuthumayo:*
Sicela unikeze inombolo yocingo yocingo oluphuthumayo.
Day01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Inyanga010203040506070809101112 / Unyaka1900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 Okufakiwe okungavumelekile
Umsebenzi / Umsebenzi:
Sicela usitshele indlela owaqala ukuzwa ngayo ngathi*
Lapha kufanele usitshele ngohlobo lwenkambo ofuna ukuyenza, kungakanani nokuthi nini.
Sicela ukhethe uhlobo lwenkambo yakho:*
I-General English - Isifundo samahora ayi-15I-English Enzulu - Isifundo samahora angama-21Inkambo yantambama - ukufundela amahora ama-6IELTS Kusihlwa - Isifundo samahora we-6Abaqalayo Isifundo sasekuseni - ukufundwa kwamahora angu-4.5 Okufakiwe okungavumelekile
Sicela ukhethe ukuthi iyiphi inkambo ongathanda ukuyijoyina.
Ungathanda nini ukuqala nini? Ngokujwayelekile lokhu ngoMsombuluko*
Day01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 / Inyanga010203040506070809101112 / Unyaka20192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050 Okufakiwe okungavumelekile
Ungathanda ukuqedela nini? Ngokuvamile lokhu kunguLwesihlanu*
Ungathanda ukutadisha amasonto amangaki?*
Zingaki iminyaka oye wafunda isiNgisi:
Iziphi izivivinyo zesiNgisi owadlulile?
Yiziphi izinjongo zakho zemfundo?
Isibonelo: Izivivinyo ongathanda ukuthatha (PET, FEC, CAE, CPE, IELTS?) Noma ukuxhumana okujwayelekile.
Indawo Yakho yokuhlala
Sinikeza indawo yokuhlala yokuhlala noma ungahlela ngokwakho ukuhlala kwakho e-UK.
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nabasekhaya bethu kanye nezinhlobo zokuhlala sicela uvakashele amakhasi omndeni wokuhlala.
Ungase ufike ekhaya lakho ngoMgqibelo noma ngeSonto ngaphambi kokuba uqale izifundo zakho.
Sicela ukhethe indawo yokuhlala*
I bhodi elinguhhafuBed and BreakfastUkuziphekelaIndawo yokuhlala / YMCA (University)Indawo yokuhlala yakho Okufakiwe okungavumelekile
Qaphela: Indawo yokuhlala / i-YMCA (ngaphambilini Yomfundi Yunivesithi) yindawo yokuhlala yokuhlala futhi iyatholakala kuphela ngezifundo ngoJulayi-Agasti.
Uma uhlela indawo yakho yokuhlala sicela usinike ikheli:
Ungathanda nini ukufika endaweni yakho yokuhlala? Ngokuvamile lena yiSonto
Ungathanda nini ukushiya indawo yakho yokuhlala? Ngokuvamile lokhu kunguMgqibelo
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Akekho kumabutho ethu asekhaya asekhaya abanikazi abasafuni ukubhema ngaphakathi kwendlu.
Sicela usitshele mayelana nanoma yikuphi ukwelashwa noma ezinye izidingo zempilo ezikhethekile noma zokudla:
Ngesikhathi sesicelo ungase ukhokhe idiphozi noma imali egcwele.
Idiphozi encane engabuyiselwa imali ye-course ye-1 yezindleko zeviki ze-1 + zokubhuka zokuhlala kwe-GBP 50.
Uma ukhetha ukukhokha yonke imali oyikhokhayo bala ngale ndlela elandelayo: Izimali zesonto x (ngaphansi kwanoma isiphi isaphulelo) + x indawo yokuhlala isonto + GBP Imali yokubhuka yokuhlala engu-50
Ungakhokha nge-Credit Card, i-Bank Tansfer, i-Check noma i-Cash.
Sicela ubone 'Indlela Yokubhalisa'ikhasi lemininingwane yethu yasebhange nokuthi singakhokha kanjani ngekhadi lesikweletu.
Ingabe ukhokha idiphozi noma imali egcwele manje?*
Sicela ufake ukuthi ukhokha malini manje:
Thumela isicelo sakho
Ngiyaqinisekisa ukuthi ngifuna ukufunda eCentral Language School, eCambridge ngezinsuku ezinikeziwe. Ngifundile futhi ngiyayamukela yonke imigomo nemibandela ekule Fomu naku Incwajana / Iwebhusayithi. Nginempilo enhle futhi anginakho ukukhubazeka ngokomzimba noma kwemizwa ngaphandle kokuchazwa kwencwadi ehlukile noma i-imeyili.
Sicela ufake uphawu ukuze uqinisekise ukuthi uyavumelana nesitatimende esingenhla*
Ngiyavuma, sicela wamukele ifomu lami lokubhalisa! Okufakiwe okungavumelekile
Ngiyaqinisekisa ukuthi ngifunde Inqubomgomo Yobumfihlo ye-CLS.
Sicela ufake uphawu ukuze uqinisekise ukuthi ufunde Inqubomgomo Yobumfihlo ye-CLS*
Ngifunde Inqubomgomo Yobumfihlo ye-CLS Okufakiwe okungavumelekile
Sicela ufake lokho okubonayo*
Ngokuthatha isikhathi sokwenza lokhu, ubonisa ukuthi ungumuntu wangempela. Ngiyabonga.